Nzuzo nke SEM: Achọpụtala nsonaazụ Google | Martech Zone
Satọde, 20 Juun 2009 Saturday, April 16, 2016 Douglas Karr
Otu enyi m kesara ụfọdụ nsonaazụ nke ego ọ nwetara maka afọ 2 gara aga na Mgbasa Ozi Njikọ, ọrụ ebe ị nwere ike ịzụta ma ree njikọ. Ndị nkwusa na-ere njikọ naanị iji nweta ego - ma enwere ohere maka blọgụ guzosiri ike yana ezigbo usoro na ogo.
Maka ndị Mgbasa ozi, ohere bụ jiri backlinks mee ka usoro ihe omume ha dị elu na engines ọchụchọ. Google's pagerank algorithm bụ oke dị arọ maka backlinks, oge ụfọdụ ọ na-egosi ogo ka mma n'agbanyeghị ogo ọdịnaya dị na saịtị gị. Ozizi a bụ na ezigbo ndị na-ebipụta akwụkwọ ntanetị nwere ezigbo mkpa dị iche iche na-adọta njikọ… na ogo ọchụchọ ha na-arịgo.
Ọnụ ọgụgụ ndị mgbasa ozi na-arịwanye elu na-arịa ọrịa na ike gwụrụ ichere ma ha na-akwụ ụgwọ naanị iji nweta ọkwa ka mma. Kwọ ọtụtụ ihe dị ukwuu bụ ọrụ dị ukwuu nke nwere ike ọ gaghị akwụ ụgwọ ọnwa ole na ole… ịzụ backlinks nwere ike ị nweta nsonaazụ pụtara ọsọ ọsọ ma dị egwu
Mbipụta njikọ kwụrụ ụgwọ na-enweghị egosi rel = ”nofollow” na mkpado arịlịka gị bụ mmebi iwu Usoro Ọrụ Google. Google na-ata ahụhụ ma de-index saịtị ha kpebiri nwere njikọ akwụ ụgwọ na ha. Maka akwụkwọ dị n'ịntanetị ziri ezi, ego ha nwere ike ikpuchi ego ọ bụla Google Adsense nwere ike inye.
Enweta ya na 2008 fọrọ nke nta ka ọ bụrụ $ 7,000… ma e jiri ya tụnyere ihe dịka $ 1,000 na Google Adsense. Ọ dịghị njọ.
N'echiche m dị umeala n'obi, ụlọ ọrụ ahịa azụmaahịa ọ bụla siri ike ugbu a nwere mmemme backlinking na akpa azụ ha iji nyere aka nyefee nsonaazụ. White hat SEO anaghịzi arụ ọrụ n'ihi na Google ejirila usoro backlink na-akwụ ụgwọ ugbu a na-ebugharị saịtị ndị bara ọgaranya na nsonaazụ ọchụchọ kacha elu.
Na uche m, Google na-n'ụzọ dị ukwuu rigged.
Tụle ndepụta nke saịtị njedebe na njikọ ya akwụ ụgwọ dị ezigbo mma. Ọ bụghị isi spam na-akpata ego ugbu a igwe mmadụ ebe ahụ, ọ bụ ihe ziri ezi n'eziokwu azụmahịa. Ma ha bụ na-ahụ maka ịzụta njikọ ma ọ bụ na ha na-n'ụzọ zụtara ha search engine ahịa ụlọ ọrụ… Amaghị m. Mana ha na-akwụ ụgwọ, a na-ejikwa nsonaazụ Google rụpụta ya.
Google kwadoro mgbanwe oge niile na algorithms ya. Na mbido afọ a, Google kwenyesiri ike na ha dị arọ karịa ụdị. Nke ahụ ọ bụ iji melite mkpa nke nsonaazụ? Ma ọ bụ ka ọ gbalịa ịgbachitere onwe ya megide mwakpo nke mmemme njikọ akwụ ụgwọ na-apụta na weebụ niile?
Ikpeazụ echiche na nke a not Amaghị m na ọ bụ maka ọdịmma gị ka ịnabata ego maka njikọ akwụ ụgwọ. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịme ka ịdebanye aha gị ma ọ bụrụ na ejidere gị (nke na-apụtaghị na ọ na-eme oge niile), na-achịkọta njikọ nke saịtị nwere obere ọkwa yana, ikekwe, enweghị mkpa ọ bụla nwere ike imerụ ogo saịtị gị. N'ihe atụ ndị enyi m, ọ kwenyere na akwụkwọ akụkọ ya adaala ma ọ nwebeghị ike ịchọpụta ihe kpatara ya.
Ọ ga-akwụsị ịkwụ ụgwọ maka njikọ? Ọ ka na-ekwu na ego ahụ dị oke mma ịjụ maka ugbu a.
Tags: backlinkingGoogle AdSenseakwụ ụgwọ njikọseo akwụkwọederede njikọ
SEO: Beingbụ na nsonaazụ bụ naanị ọkara agha
Jun 21, 2009 na 11:25 AM
Ana m ewu WordPress ndụmọdụ na nkuzi saịtị, nke edepụtara kemgbe Jenụwarị. Enwere m posts dị elu iri ise na ise, ụfọdụ n'ime ha bụ okwu 52 +, ọdịnaya niile dị na mbụ, ha niile jikọtara iji nye usoro akụrụngwa siri ike, na ndị niile nwere ọnụ ọgụgụ dị mkpa nke njikọ na-apụ apụ (ọ bụ weebụ, ka emechara).
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ isiokwu ọ bụla nwere ọdịnaya nwere ike ime, ihe onye na - agụ ya nwere ike ime Ugbu a.
N'agbanyeghị oke ike, ihe dị ka 2 nke ederede ndị a na-abanye na peeji 100 kachasị elu na Google.
Kedu nke m na-agaghị echebara anya nke ọma gbasara% belụsọ 90% nke peeji ndị dị na nsonaazụ kacha elu 100 bụ ihe mkpofu. Nọmba ọnụọgụ abụọ bụ blọọgụ spam.
Ugbu a, dịka ọkà mmụta sayensị, a zụrụ m idebe.
Ihe m chọpụtara bụ na Google enweghị ụzọ ziri ezi ọ ga-esi gosi ndị na-agụ ya ihe ma ọ bụ baara ha uru.
Dị ka m kwuru, Achọghị m ịma nke ukwuu na m dị ala. Anụ m bụ na blọọgụ spam na-atọ m ụtọ.
Amaara m na na “ọkụ” ahịa, ma ọ bụrụ na Google adịghị chepụta a, obere nkwusa nke elu
a gaghị achọta ozi dị mma site na iji nchọta ihe. Ma nke a na-eje ozi
Google bu emeghe ajuju. N'ezie ọ gaghị enyere ndị na-agụ akwụkwọ aka.
Gị bụ akụkọ m na-ahụ kwa ụbọchị, Dave. Anaghị edepụta nnukwu ndị nkwusa nwere ọdịnaya dị mma. Egwu m, dịka m dere n'elu, bụ na a na-achịkwa usoro ihe niile site na iji usoro njikọ akwụ ụgwọ. Google choro atumatu ozo na nke a - tinyere itinye ihe di nkpa karie ihe ibe a kariri ewu ewu.
Ọ bụrụ na nke a gaa n'ihu ọ ga-emechi windo azụmaahịa: obere ighe agaghị enwe ike iwepụ ihe mgbochi ịbanye na iji ọrụ siri ike na ngwaahịa dị mma. Mgbe ahụ anyị abịaghachila ebe anyị bidoro.